Steam mere ndokwa ire ere n'oge okpomọkụ
Ịgba chaa chaa na dijitalụ ọrụ ọrụ Steam kwusara mmalite nke ire ere okpomọkụ. Ruo July 5, onye ọ bụla apụghị ịzụta ihe egwuregwu egwuregwu ndị a ma ama na ego, ma meriekwa akara n'ọsọ egwuregwu ọhụrụ ahụ. N'oge ire ere, ndị ọrụ ugbo Steam ga-enwe ohere ịzụta na ọnụ ala dị ala ma ọkwa ọhụrụ na ọkwa ndị kachasị ewu ewu na afọ gara aga.
AsRock na-akwadebe usoro DeskMini A300 maka windo AMD
AsRock na-akwadebe ịmepụta DeskMini A300 ọkpụkpụ usoro maka mgbakwunye nke ndị AMD Ryzen processors. Foto ole na ole nke ihe ọhụrụ ahụ nke ndị na-emepụta nke Japan bipụtara. AsRock DeskMini A300 AsRock DeskMini A300 AsRock DeskMini A300 Isi nke AsRock DeskMini A300 ga-abụ motherboard na AMD A300 chipset, nke a haziri maka PC kọmpat.
Ndị ọrụ telivishọn mere mkpesa banyere enweghị ike nke "Iwu Mmiri"
Ndị na-arụ ọrụ telivishọn Russia adịghị enwe ike imezu iwu nke "Yarovoi Law", nke na-achọ ka ọ ghara ịbanye n'ụgbọ okporo ụzọ, ebe ọ bụ na e nweghị ngwá ọrụ a kwadoro maka nzube a na mba ahụ. Banyere akwụkwọ akụkọ Kommersant. Dị ka ọrụ mgbasa ozi nke Rossvyaz si kwuo, ụlọ akwụkwọ nyocha ga-enweta ikike ịkọpụta ebe nchekwa nchekwa data naanị na njedebe nke afọ a.
Capcom Studio na-ekwu banyere ihe ịga nke ọma nke mbụ nke Resident Evil 2
Ndị na-emepụta Japanese ndị na-emepe emepe 2 Remake na-ekerịta ọnụ ọgụgụ nke oké egwu egwu. N'ụlọ ahịa Steam n'ụbọchị a tọhapụrụ ya, egwuregwu ahụ gosiri nsonaazụ dị ịrịba ama nke online - karịa mmadụ 55,000. Ọjọọ 2 bụ mmalite nke kachasị nke ọma n'etiti ọrụ Capcom na ụlọ ahịa Valve.
Facebook pụtara ụgwọ dị iche iche
Netwọk mmekọrịta netwọk Facebook amalitela inwale otu ngwá ọrụ ọhụrụ maka ịhazi ego - ndebanye aha. Na ya, ndị nwe obodo ga-enwe ike ịnye ego kwa ọnwa maka ịnweta ọdịnaya nwebisiinka ma ọ bụ ndụmọdụ na ego $ 5 na $ 30. Ụgwọ ndị a na-akwụ ụgwọ dị iche iche dị na Facebook tupu oge ahụ, ma ha mejupụtara monetization ha site na ịgafe usoro ọrụ nke netwọk mmekọrịta.
Ndị nnọchiteanya nke Electronic Arts na BioWare kwuru banyere usoro chọrọ maka ihe omume Anthem. Ndepụta nke ihe ndị dị mkpa maka kọmputa nkeonwe bụ Windows 10. O yikarịrị, egwuregwu ahụ ga-ajụ ịgba ọsọ na mbipụta 7 na 8 nke sistemụ arụmọrụ. Maka ndi ozo, Anthem adighi adi nma banyere ihe ngwaike ma agaghi acho maka nhazi n'elu.
HDMI na USB: kedu ihe dị iche
Ndị ọrụ kọmputa niile maara banyere ọnụnọ nke njikọ abụọ maka nchekwa nchekwa - HDMI na USB, mana ọ bụghị onye ọ bụla maara ihe ọdịiche dị n'etiti USB na HDMI bụ. Kedu USB na HDMI? Interface Definition Multimedia Interface (HDMI) bụ ihe ntanetị maka ikesa ozi ihe ọmụma dị elu. A na-eji HDMI nyefee faịlụ vidio dị elu na ọtụtụ ọhụụ nke ọdịyo dijitalụ nke a ga-echebe site na nbipụta.
Na-ekpughe nkọwa nke onye ọhụụ ọhụrụ na Heroes of Storm
Ndị nnọchiteanya nke Blizzard studio na-akọrọ ndị nwatakịrị a na-akpọ dike nke Storm Storm. Na Jenụwarị 2, otu dike sitere na Diablo ụwa pụtara na sava ule nke egwuregwu ahụ. Banyere ikike na atụmatụ nke Alaeze Ukwu ndị mmụọ ozi bụ obere amaara, mana ugbu a, ndị egwuregwu nwere ike iji nkọwa nke nkà nke agwa ahụ. Ndị nwe obodo nwere ikike pụrụ iche "Ụda mgbagha".
Ọhụụ ọhụrụ apụtawo na Overwatch
Blizzard agbakwunyewo onye ọzọ na-agba agba ọsọ ọsọ Overwatch. Oge a, ndepụta nke ndị dike maka nhọrọ maka ndị egwuregwu na-agbakwunye site na hamster Hamsible, bụ onye bụkwa Taran, onye na-achịkwa robot ọgụ ya. Dị ka akụkọ akụkọ ihe mere eme si kwuo, Hammond nwetara echiche na ụdị dị iche iche maka ụmụ anụmanụ na-emepụta ihe dị ka ihe si na nyocha e mere na mbara ala Horizon.
Omume, ụdị na iche iche USB 2.0 na 3.0
Mgbe ụtụtụ nke nkà na ụzụ kọmputa gasịrị, otu n'ime nsogbu ndị bụ isi nke onye ọrụ ahụ bụ ihe na-adịghị mma nke ngwaọrụ - ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche nwere ọrụ maka ijikọta akụkụ ndị ọzọ, ọtụtụ n'ime ha dị njọ ma bụrụ ndị a na-apụghị ịdabere na ya. Ihe ngwọta bụ "ụgbọ ala serial ụwa" ma ọ bụ USB maka mkpụmkpụ.
Google amaghi nsogbu n'igoro site na Docs
Ndị nnọchiteanya Google kwuru banyere ọnọdụ ahụ na ịnweta akwụkwọ site na ọrụ Docs na ntinye nke "Yandex". Dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, Google Docs na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi ma nọgide na-echebe ya site na ebe nrụọrụ weebụ hacking, na ụkọ na-adịbeghị anya mere site na ezighi ezi nzuzo. Akuko ahụ na-ekwu na ọbịakọta dị iche iche na-abanye na nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-eme ka ọha mmadụ mara.
E wepụrụ ihe ngosi nke iko ndị ọzọ na-eme ka Oculus Rift kwụsị
Site na mkpebi a, Facebook nwere ike ịkwado nlekọta nke otu n'ime mmepe mmepe. Ụbọchị ọzọ, ngalaba-onye nchoputa Oculus VR, nke Facebook, Brendan Irib kwuru na ya lara ụlọ ezumike nká. Dị ka asịrị, nke a bụ n'ihi mmezigharị nke Facebook malitere na ụlọ ọrụ ya, nakwa n'eziokwu na echiche nke Facebook na Brendan Iriba na-achịkwa n'ihu ọganihu nke nkà na ụzụ na-emepụta nke ọma.
Ndị na-egwu egwuregwu na Odyssey na-echere ọdịnaya ọhụrụ na January
Ndị nnọchiteanya nke Ubisoft studio na-ekwu maka mmụgharị nke Creed Odyssey nke Assassin na nwelite nke January. Ndị mmepe ga-agbakwunye egwuregwu ahụ n'efu maka alaka abụọ nke ọrụ nyocha. Otu n'ime akụkọ a tọhapụrụla ya ma kpọọ ya "Ụmụ nwanyị nke Lala". Ọ dị maka ndị ọrụ ruo ọkwa 13.
Ndị na-eme egwuregwu na-ewetu Total War: Rome II rating n'ihi na ụmụ nwanyị
Ndị na-egwu egwu adịghị enwe obi ụtọ na njedebe ikpeazụ na - eme ka ọnụ ọgụgụ ndị isi ụmụ nwanyị na - ahụ maka akụkọ ihe mere eme, nke na - ewere ọnọdụ na Rom oge ochie. Egwuregwu Strategy Total: Rome II site na Ụlọ Nzukọ Creative ahụ pụtapụtara afọ ise gara aga, ma ndị mmepe ka na-akwado egwuregwu ahụ, na-enyefe akara maka ya.
Valve na-akwadebe nkwalite mmezi arụmọrụ na SteamVR
Ha choro ime ka eziokwu di omimi karia. Valve, ya na HTC - onye na-emepụta ihe ngosi nke ihe ngosi eziokwu nke dị ndụ - na-eme ka Steam nweta nkà na ụzụ nke a na-akpọ Motion Smoothing ("smoothing smoothing"). Ụkpụrụ nke ọrụ ya bụ na mgbe arụmọrụ daa, ọ na-adọta ogwe ndị ahụ na-efu na-adabere na omume abụọ gara aga na ihe onye ọkpụkpọ ahụ.
Ndị mmepe Total War zara azịza nke ndị Fans
Ndị mmepe nke Total War: Rome II nke akụkọ ihe mere eme kwuru banyere mmeghachi omume mmeghachi omume nke ndị egwuregwu na-agakarị na-apụta nke ndị inyom n'ozuzu ha. Ụlọ ọrụ Creative Assembly na nkwupụta ya kwuru na pasent nke ndị isi ndị inyom na-akwụ maka ụgwọ na mmelite kachasị ọhụrụ, n'agbanyeghị nkwanye ùgwù nke ndị egwuregwu, agbanweghị.
Ndị Russia na-eme njem nlekọta na-egbochi ha
Ndị ọrụ Ịntanetị dị na Russia n'ozuzu ha na-enwu nchedo nchebe nke ndị na-eme njem ha ma achọghị ka ha gbanwee ntọala ndabara. Nkwubi okwu a sitere na nchoputa nke Avast mere. Dị ka nchọpụta ahụ si kwuo, ọkara nke ndị Russia mgbe ha zụrụ onye na-agbanye router gbanwere nbanye na paswọọdụ nke onye na-emepụta iji chebe onwe ha pụọ ​​na hacking.
Njirimara data nzuzo nke Google Doc dị na ọha.
Nyocha ahụ "Yandex" malitere ịkọwa ọdịnaya nke Google Docs ọrụ, bụ nke a na-enweta ọtụtụ puku akwụkwọ nwere nzuzo nzuzo. Ndị nnọchiteanya nke search engine Russia na-akọwa ọnọdụ ahụ site na enweghị nchekwa paswọọdụ na faịlụ ndị edeturu. Ihe ndekọ Google Docs pụtara na ntinye nke "Yandex" na mgbede nke July 4, nke ndị nchịkwa nke ọtụtụ channelụ Telegram hụrụ.
Gọọmentị Brazil mere nnyocha n'ime Valve
A na-egosipụta ntuli aka ntuli aka na Brazil na egwuregwu vidio. Ma ọ bụghị nke kacha mma. Ndị ọchịchị Brazil enweghị obi ụtọ na egwuregwu ahụ a na-akpọ Bolsomito 2k18, wepụtara na steam na October 6. Nke a bu bitemap ebe otu onye na-egwu egwu onye omekorita Brazil bu Zhair Bolsonar (aha ya adighi ekwuputa ya n'ezoghi ya, mana aha aha ya na-ekwu maka onwe ya) aghaghi ikpochapu obodo nke "ihe ojoo."
Valve na-arụ ọrụ na okpu igwe n'ezie ya?
Ị nụ banyere nsụgharị VR nke Half-Life. N'oge na-adịbeghị anya, foto bịara na weebụ na-egosi ihe ngosi nke ikpuchi ihu igwe. Otu n'ime foto na-egosi na Valve ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na PCB. Ụbọchị dị na ihuenyo nke kọmputa ahụ nke tinyere na etiti na foto ọzọ na-egosi na ewerere foto na July nke afọ a.